मिथिलाको लघुवित्त लाभांश पारित गर्न चैत २९ गते एजीएम ,बुक क्लोज कहिले? – Gorkhali Voice
मिथिलाको लघुवित्त लाभांश पारित गर्न चैत २९ गते एजीएम ,बुक क्लोज कहिले?
२०७७, ८ चैत्र आईतवार १७:२९
काठमाडौं : मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैत २९ गते वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ । कम्पनीले १२% बोनस सेयर र कर तिर्न०.६३% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सभामा लैजानेछ । यस्तै, बोनस सेयरपछि पुँजी वृद्धि हुने भएकाले सोही बमोजिम प्रबन्धपत्रतथा नियमावली संशोधन हुनेछ ।
सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न एक जना महिला सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने एजेन्डा पनि रहेकोछ । मिथिलाले अन्य कुनै लघुवित्त कम्पनीसँग मर्जर वा एक्विजिसन गर्नु परेमा सम्पूर्ण कामको अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिनेभएको छ । कम्पनीले हाल कायम १२ करोड १७ लाख ४० हजार ८४२ रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा १२% बोनस प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित बोनसपछि चुक्ता पुँजी १३ करोड ६३ लाख ४९ हजार ७४३ रुपैयाँ पुग्नेछ । सभा होटल राजदरबार एन्ड नवरंग रिसोर्ट, जनकपुरधनुसामा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । सभा प्रयोजनका लागि चैत १७ गते बुक क्लोज हुने भएकाले चैत १६ गतेसम्म कायम रहने सेयरधनीमात्र सभामा भाग लिन र लाभांश पाउन योग्य हुनेछन् ।